चर्चामा आउन नपाउँदै बन्द गरिँदै न्यूरोडको ‘अम्ब्रेला स्ट्रीट – Wow Sansar
चर्चामा आउन नपाउँदै बन्द गरिँदै न्यूरोडको ‘अम्ब्रेला स्ट्रीट
January 1, 2021 79
काठमाडौं। न्यूरोडको संकटा क्षेत्रमा बनाइएको ‘अम्ब्रेला स्ट्रीट’ (छाता सडक) बन्द गरिने भएको छ। मानिसहरूको चाप थेग्न नसकेपछि आइतबारदेखि संकटा क्षेत्रको सडकमाथि राखिएका छाता हटाउन लागिएको हो।
कोरोना महामारीपछि अस्तव्यस्त बनेको बजार व्यवयासलाई प्रचारप्रसारका लागि भन्दै त्यस क्षेत्रका स्थानीय, व्यापारी तथा संकटा क्लबले सडकमाथि छाता राखेका थिए। तर, अवलोकन गर्न आउने मानिसको भीड थेग्न सक्ने अवस्था नरहेपछि हटाउने निर्णयमा पुगिएको संकटा क्लबमा सचिव आशिषमान सिंहले जानकारी दिए।
दैनिक २० हजार जनाभन्दा बढीले त्यस क्षेत्रको अवलोकन गर्दै आएका छन्। शनिबारको दिन झन् बढी आउने गरेका छन्।
“व्यापारीहरू मिलेर सडकमाथि छाता राखेका थियौं। यो त भाइरल नै बन्यो। अहिले टिकटक बनाउने, फोटो खिच्ने तथा भिडिओ बनाउनेहरू यतिधेरै आए कि हामीले व्यवस्थापन नै गर्न सक्ने अवस्था आएन,” सचिव सिंहले भने।अत्यधिक भीड हुन थालेपछि हटाउन लागिएको छाता कोरोना महामारीको अवस्था सहज भएपछि फेरि राखिने उनको भनाइ छ। अब आइतबारदेखि सडकमाथि राखिएका छाता हटाइने उनले बताए। अहिलेसम्म १० लाखभन्दा बढीले अवलोकन गरिसकेको अम्ब्रेला स्ट्रीट महामारी सहज भएपछि नयाँ योजनासहित राखिने सचिव सिंहले बताए।
“हामीले त यसरी भीड होला भन्ने सोचेका थिएनौं। अहिले व्यापार पनि थिएन। त्यही भएर लौ यस्तो गरौँ न भनेर छाता राखेका थियौं। यो त पूरै भाइरल भएछ,” उनले भने।
कसरी बन्यो अम्ब्रेला स्ट्रीट?
न्यूरोडस्थित टेवहालको आकाशमाथि ६०० वटा छाता राखियो। संकटा क्लबको पहलमा करिब नौ लाख रूपैयाँ संकलन गरेर टेवहाल सिँगारिएको थियो। व्यापार प्रवर्द्धन तथा पर्यटक आकर्षित गर्ने उद्देश्यले टेवहालमा नौलो प्रयोग गरिएको थियो।
टिकटकमा भिडिओ सार्वजनिक भयो। टिकटकमार्फत धेरैको अवलोकनको केन्द्र बन्न पुगेको सचिव सिंहको भनाइ छ।
लामो लकडाउनका कारण व्यापार व्यवसाय ठप्प भयो। त्यसको प्रत्यक्ष मारमा राजधानीको मुख्य व्यापारिक केन्द्र न्यूरोडका व्यापारी पनि परे। लकडाउन खुलेसँगै चहलपहल विस्तारै बढ्न थाल्यो। तर, व्यापारले पहिलेजस्तो गति लिएन।
त्यसका लागि केही नयाँ गर्नुपर्ने थियो। टेवहालका बाटोमा रंगीचंगी छाता झुन्ड्याइयो। करिब १५० मिटरको दूरीमा छातै-छाता झुन्ड्याइयो। सडकछेउमा फूलको गमला पनि राखियो।
निकै रोचक बनेपछि मानिसहरूको आकर्षणको केन्द्र बन्न पुग्यो। संकटा क्लबका सचिव सिंह पोर्चुगल गएका बेला त्यहाँको सडकमाथि छाता राखेको देखेका थिए। ‘‘हामी पनि त्यही उपाय अपनाएर अगाडि बढ्ने हो कि? भनेर मैले प्रस्ताव राखेँ। मेरो प्रस्ताव अरूलाई पनि मन पर्‍यो,” उनले भने, “व्यापारीबाट ८० हजार रूपैयाँ संकलन गरियो। त्यही दिनदेखि छातासहितको बाटो सिंगार्ने काम गर्‍यौं।”
कोरोना महामारीका कारण बढी भीडभाड नगर्न सुझाव आएपछि तत्काल यो हटाउने अवस्थामा पुगेको उनको भनाइ छ।
Prevकाठमाडौ कै यी ठाउँः जहाँ पुरुष खोज्न स्कुटरमा आउँछन् युवती !
Nextठुलो सपना बोकेर आमाछोरी काठमांडु हिड़े,हिड्ने बेलामा यती ठूलो सम्मान,छिमेकीको रूवाबासी-भिडियो हेर्नुहोस
आधा रातको निन्द्रामा मानिसहरु प’त्थर बन्छन्, पूरा पढ्नुहोस् चकित पर्नुहुनेछ…
बागलुङमा बाघसंग दोस्ती गर्ने दिपेन थापा आए काठमाण्डौ, कारण यस्तो,बाघसंगको दोस्तीबारे यसो भन्छन (भिडियो सहित) (1998)